Uri kufunga nezvekutorwa kwebhizinesi here? Kumbira rutsigiro rwemutemo
Kana iwe uine yako kambani, pane inogona kuuya nguva iyo paunoda kumira kambani. Kune rumwe rutivi, zvakare zvinogoneka kuti iwe unoda kutenga kambani iripo. Muzviitiko zvese izvi, kuwanikwa kwebhizinesi kunopa mhinduro.
KUFANIRA KANA KUTENGA BHUKU?
Kuwanikwa kwebhizinesi inzira yakaoma, inogona kutora mwedzi mitanhatu kusvika pagore kupedzisa. Naizvozvo zvakakosha kugadza mupi wezano wekuwana, uyo anogona kukupa zano nekukutsigira, asi anogona zvakare kutora mabasa kubva kwauri. Nyanzvi pa Law & More ichashanda newe kuti uone maitiro akanyatsonaka ekutenga kana kutengesa kambani uye anogona kukupa rutsigiro rwemutemo
Roadmap yekutorwa kwebhizinesi
Kunyangwe kuwanikwa kwega kwega kwebhizinesi kwakasiyana, zvichienderana nemamiriro ezvinhu emakesi, pane migwagwa yepasi rose inoteverwa kana iwe uchida kutenga kana kutengesa kambani. Law & More'magweta achakubatsira iwe nedanho rega-rega rekutungamira gwara.
nematambudziko emutengi ”
Nhanho 1: Kugadzirira kwekutora
Bhizinesi isati yaitika, zvakakosha kuti iwe ugadzirire zvakanaka. Muchikamu chekugadzirira, zvaunoda iwe nezvido zvako zvinoumbwa. Izvi zvinoshanda kune ese mapato ari kuda kutengesa kambani uye bato rinoda kutenga kambani. Chekutanga pane zvese, zvakakosha kuti uone kuti ndeapi mabasa ebhizinesi anoitirwa nekambani, pamusika uyu kambani iri kushandira uye kuti yakawanda sei yaunoda kugamuchira kana kubhadhara kune kambani. Izvo chete kana izvi zvinyatsojeka, kuwanikwa kunogona kuve kwakavakirwa. Mushure mekunge izvi zvatsanangurwa, chimiro chepamutemo chekambani uye basa remurairidzi (s) uye wekugovana (s) dzinofanirwa kuongororwa. Inofanirawo kutsanangurwa kana ichizikanwa kuti kuwanikwa kuitike kamwe chete kana zvishoma nezvishoma. Muchikamu chekugadzirira zvakakosha kuti usazvirega uchitungamirwa nemanzwiro, asi kuti iwe utore danho rakanyatsofungwa. Magweta a Law & More ichakubatsira neizvi.
Nhanho yechipiri: kuwana mutengi kana kambani
Kana zvishuwo zvako zvaramburwa zviri pachena, danho rinotevera ndere kutsvaga mutengi akakodzera. Nechinangwa ichi, iyo isingazivikanwe kambani profile inogona kudhirowa kumusoro, pane izvo izvo vatengi vakakodzera vanogona kusarudzwa. Kana mukwikwidzi akakomba awanikwa, chekutanga zvakakosha kusaina chibvumirano chisina kuburitsa. Pashure pacho, ruzivo rwakakodzera nezvekambani runogona kuwanikwa kune anenge achitenga. Paunenge uchida kutora pamusoro pekambani, zvakakosha kuti iwe ugamuchire zvese zvinoenderana neruzivo nezvekambani.
Nhanho 3: hurukuro yekuongorora
Kana angangoita mutengi kana kambani yaanogona kutora kuti awane chinzvimbo akawanikwa uye mapato akachinjana ruzivo nemumwe, yave nguva yekutanga nhaurirano inoongorora. Iyo itsika kuti kwete chete anogona kuve mutengi uye mutengesi aripo, asi zvakare chero vapi vezano, vezvemari uye mvumo.
Nhanho 4: kutaurirana
Nhaurirano dzekutorwa dzinotanga kana mutengi kana mutengesi achinyatsofarira. Zvinokurudzirwa kuti kutaurirana kuitwe nachiremba wekuwanikwa. Law & More'magweta anogona kutaurirana pachako nezve mamiriro ekutora uye mutengo. Kamwe chibvumirano chasvika pakati pemapato maviri aya, tsamba yekudaidzira inosimudzwa. Mutsamba iyi yekuvavarira, mazwi uye mamiriro ekutorwa uye gadziriro dzemari dzakaiswa pasi.
Nhanho 5: Kuzadziswa kwekutorwa kwebhizinesi
Chibvumirano chekupedzisira chekutenga chisati chaumbwa, kunyatsoongororwa kwakakodzera kunofanirwa kuitwa. Mune izvi kushingairira kurongeka uye kukwana kwe data rese rekambani kunoongororwa. Iko kushandira kwakakodzera kwakakosha. Kana kushanya kwakakodzera kusingaiti nemisikanzwa, chibvumirano chekupedzisira chekutenga chinogona kukwiridzwa. Mushure mekuendeswa kwehunyori kwakanyorwa nemunyori, mvumo yaendeswa uye mutengo wekutenga wabhadharwa, kuwanikwa kwekambani kwapera.
Nhanho 6: sumo
Kubatanidzwa kwemutengesi hakuwanzo kupera pakarepo bhizimusi parinenge ratamiswa. Zvinowanzobvumwa kuti mutengesi anounza mutsivi wake uye anomugadzirira iye basa racho. Nguva yenguva yekuitwa iyi yaifanirwa kunge yakakurukurwa pamberi pehurukuro.
Pane nzira dzinoverengeka dzekubhadhara mari yekutora bhizinesi, imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira. Aya mukana wemari anogona zvakare kuve pamwe. Iwe unogona kufunga nezve inotevera sarudzo dzekutsvagisa bhizinesi kuwanikwa.
Imene mari yemutengi
Izvo zvakakosha kuti uongorore kuti imarii yako yemari iwe yaunokwanisa kana kuti unoda kupa mupiro kambani isati yatengwa. Mukuita, zvinowanzove zvakaoma kwazvo kupedzisa bhizinesi kuwanikwa pasina chero chinhu chako chaunacho. Nekudaro, huwandu hwemupiro wako pachako hunoenderana nemamiriro ako.
Chikwereti kubva kumutengesi
Mukuita, bhizinesi inowanikwa inowanzopihwawo mari kumutengesi achipa mari yemari muchimiro chemukwereti kune anotevera. Izvi zvinozivikanwawo semutengesi wechikwereti. Chikamu chinotsigirwa nomutengesi kazhinji hachisati chakakura kupfuura chikamu icho mutengi iye anobatsira. Mukuwedzera, zvinowiriranwawo kubvumirana kuti mubhadharo uchaitwa muzvikamu. Chibvumirano chechikwereti chinoumbwa kana chikwereti chemutengesi chakabvumiranwa.
Izvo zvakare zvinoita kuti mutengi atore zvikamu zvemukati mukambani kubva kumutengesi muzvikamu. Urongwa hwekutsvaga mari hungasarudzirwe izvi. Muchiitiko chegadziriro yekuwana-kubhadhara, kubhadhara kunoenderana nemutengi kuwana imwe mhedzisiro. Nekudaro, uku kurongeka kwekutora kwebhizinesi kunosanganisira njodzi huru muchinoitika chekupokana, sezvo mutengi achikwanisa kupesvedzera zvawanikwa nekambani. Mukana wemutengesi, kune rimwe divi, inogona kunge iri yakawanda inobhadharwa kana purofiti yakawanda ichiitwa. Chero zvazvingaitika, zvine hungwaru kuve neakazvimirira ekutarisa yekutengesa, kutenga uye kudzoka pasi pechirongwa chekuti uwane.
(In) Vakasarudzika investa
Mari inogona kutora fomu yezvikwereti kubva kune zvisina kujairika kana vanosarudzika mari. Vamiriri vasina kurongeka ishamwari, mhuri uye vavanozivana. Izvo zvikwereti zvakadaro zvakajairika mukuwanikwa kwebhizinesi remhuri. Nekudaro, zvakakosha kwazvo kunyora nemazvo mari kubva kunevasina mari mari kuitira kuti pasave nekunzwisisana kana kupokana kuchamuka pakati pemitezo yemhuri kana shamwari.
Uye zvakare, kubhadhara mari nevanoisa mari zvinogoneka. Aya mapato mapato anopa kuenzana nenzira yechikwereti. Chinhu chinokanganisa kumutengi ndechekuti vagadziri vezvimiro kazhinji vanowanzove vagovani vekambani, izvo zvinovapa imwe huwandu hwekudzora. Kune rimwe divi, vagadziri vemari vanogona kugadzira network yakakura uye kuziva kwemusika.
Maitiro ekutsvaga mari ari kuramba achikurumbira kuunganidza mari yakawanda. Muchidimbu, kuunganidza mari kunoreva kuti kuburikidza nemushandirapamwe wepamhepo, nhamba yakakura yevanhu vanokumbirwa kuisa mari mukutenga kwako. Njodzi yekudzosera mari zhinji, zvisinei, kuvanzika; kuti uone kuzadza mari, iwe unofanirwa kuzivisa pachine nguva kuti kambani iri kutengeswa.
Law & More ichakubatsira iwe pakuongorora mikana yekuwana mari yekutora bhizinesi. Magweta edu anogona kukuyambira pane izvo zvinokodzera mamiriro ako uye kukubatsira kuronga mari yacho.